apple haizokumanikidze kuti uvandudze kune ios 15 kana iwe & apos; wakasununguka kumhanya ios 14
Kuru Nhau & Ongororo Apple haizokumanikidza kuti uvandudze kuIOS 15 kana iwe & apos; zvakare wakasununguka kumhanya iOS 14
Apple haizokumanikidza kuti uvandudze kuIOS 15 kana iwe & apos; zvakare wakasununguka kumhanya iOS 14
Iine (online-chete) 2021 edition yeWWDC (Worldwide Developers Conference) yakazoenderera mberi nhasi, midhiya yese inotariswa kune anotevera mavhezheni eApple & apos; s akawanda anozivikanwa mashandiro masisitimu, akagadzirirwa kuburitswa mune yavo yakagadzikana fomu pa imwe nongedzo mukudonha.
Asi mukufamba kusingawanzoitika, iyo Cupertino-based tech hofori iri kuchengeta iOS 14 mukuonekera (neimwe nzira) mushure mekufumura uye kunyatso tsanangura sequel yayo ne ... chaizvo kutora peji kubva mubhuku reGoogle & apos.
Sezvakataurwa na MacRumors , Apple inoronga kugadzira iyo iOS 15 kugadzirisa sarudzo kune wega wega muridzi weese aripo uye epfuura-gen maPhones akakodzera kuita kuti software isvetuke kutanga munaGunyana. Zviripachena, hapana munhu akambomanikidzwa nepfuti kuisa iOS 14 kana chero yekare OS inovaka nekukurumidza painenge yawanzo kuwanikwa.
Asi kusvika gore rino, kana iwe waida kuchengeta nharembozha yako & apos; s chengetedzo-kusvika-kudhara, iwe waifanira kutanga wambundira chero chikuru iOS vhezheni yaive yazvino. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kuramba kusvetuka pane iyo iOS 14 bandwagon, semuenzaniso, kudzamara iwe uchinzwa kugadzikana kusiya iOS 13 kumashure, asi kubva pakuona kwekuchengetedza, zvaive zvine njodzi kumira kureba kwenguva refu.
Izvo hazvichazove zvakadaro kana iOS 15 ichibudikira kuvanhu, sekutaurwa kwevanhu vazhinji vachapihwa sarudzo chaiyo pakati pe & apos; izvo zvazvino maficha uye seti yakazara kwazvo yezvigadziridzo zvekuchengetedza 'kune rumwe rutivi uye zvishoma zvishoma zvinhu zvekare zvakabatanidzwa ne' zvakakosha kuchengetedzwa kwekuvandudza 'pane imwe.
Kunyangwe izvo zvingangonzwika senge-isina-brainer kune vashandisi vazhinji, vamwe pasina mubvunzo vanofarira mukana wekumirira uye nekuona kugadzikana uye kutsetseka kweIOS 15 inoratidza pakuratidzira usati wazvipira kune yekuvandudza. Iwe unogona zvakare kusungirira pane yako yaunoda iOS 14 kana iwe uchitya yako yekare iPhone 6s, 6s Uyezve, yekutanga-gen SE, kana iPhone 7 uchanetseka nekushandisa zvakanyanya maApple & apos; s maazvino maficha.
Tichienzanirana kuendesa makuru eOS kukwidziridzwa uye 'akakosha' ekuchengetedza zvigamba kune chaiwo iwo madhizaini, chokwadika, ndizvo zvakaitwa neGoogle uye nharembozha yavo yekugadzira zvigadzirwa kubva, zvakanaka, zvachose. Munguva pfupi, Apple & apos; s uncharacteristic kufamba kunosungirwa kukanganisa chiyero chekutora kweIOS 15, asi mushure mechinguva, isu hatitarisire kuti vanhu vazhinji vanonamira neshanduro yekare.
Kunze kwezvo, chimwe chinhu chinotitaurira kuti kambani inonyatso ziva kuti izvi zvinogona kutungamira kuchinetso chekupatsanurwa kwemhando, izvo zvinogona kureva kutipakupedzisiraunoda kutora iOS 15 kuti uenderere mberi nekugamuchira matsva ekuchengetedza
renyeredzi s3 mini kuburitsa zuva
Kupfeka Oleophobic - zvazviri, kuchenesa foni yako, zvaunofanira kuita kana kupfeka kukaserera
Pano & apos; s nei Google Mepu ichiri nani pane Apple Mepu
iPadOS 15 maoko-on - tarisa izvo zvitsva maficha!